Imaaraadka Carabta oo amray in Soomaalida si toos ah loo siiyo visaha Dalku-galka hada kadib
HomeWararka MaantaImaaraadka Carabta oo amray in Soomaalida si toos ah loo siiyo visaha Dalku-galka hada kadib
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay Jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inay Imaaraadka ay fududeyn doonaan sidii ay Soomaalida ku heli lahaayeen dal-ku-galka dalkaas.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale Jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed la wadaagay dadaalka ay dowladda Soomaaliya galineyso xoojinta xiriirka Imaaraadka, taas oo ka dulqaadaysa caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan.
“Kulanka aan la qaatay Madaxweynaha waxyaabaha ugu horreeyey ee aan kala hadlay waxa ay ahaayeen fududeynta sharciyada, dal ku galka iyo guud ahaan isu-socdka muwaadiniinta, isla markiiba Madaxweynaha Imaaraadka waxa uu amray in Safaaraddooda magaalada Muqdisho ay dadka Soomaaliyeed si toos ah uga soo qaataan fiisaha. Sidoo kale, dhammaan caqabadaha kale ee jira waxaan isku raacnay in la xalliyo oo guddiyo farsamo ay ka shaqeeyaan fududeynta dhaq-dhaqaaqa ganacsiga, bangiyada, maalgashiga iyo sharciyada,” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Sidoo kale wuxuu uga xog warramay xaaladda guud ee dalka, waxa uuna xusay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ahmiyad weyn siineyso kobcinta dhaqaalaha, horumarinta bangiyada, maalgashiga dalka, gaar ahaan dhinacyada beeraha, xoolaha iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ah.